Gburugburu ski na snowboard na enyo enyo - ULLER
Oju Mmiri Black / Black
Nye ọnụahịa18000 € 180.00 € Ụdị oge 22500 € 225.00 € Ị na-echekwa € 45
Avalanche Black / isi awọ
Avalanche Black / odo
Nye ọnụahịa8900 € 89.00 € Ụdị oge 12000 € 120.00 € Ị na-echekwa € 31
Nye ọnụahịa15500 € 155.00 € Ụdị oge 22500 € 225.00 € Ị na-echekwa € 70
Avalanche Blue / isi awọ
Avalanche Green / Nwa
Mmiri Grey / Black
Nye ọnụahịa19000 € 190.00 € Ụdị oge 22500 € 225.00 € Ị na-echekwa € 35
Avalanche oroma / acha anụnụ anụnụ
Avalanche White / Nwa
Avalanche White / udara
Blizzard ojii / uhie
Blizzard ojii / odo
Blizzard Green / Enyo
Blizzard Gray / Uhie
Blizzard Red / Enyo
Blizzard White / ọla edo
Cliff Black / udara
Cliff Black / isi awọ
Oke ugwu Blue / Red
Cliff Blue / odo
Ọcha ọcha/acha anụnụ anụnụ
Cornice Nwa / Black
Cornice Nwa / Blue
Nye ọnụahịa8900 € 89.00 € Ụdị oge 18500 € 185.00 € Ị na-echekwa € 96
Cornice Nwa / Enyo
Nye ọnụahịa11000 € 110.00 € Ụdị oge 18500 € 185.00 € Ị na-echekwa € 75
Cornice Blue / Nwa
Nye ọnụahịa14500 € 145.00 € Ụdị oge 18500 € 185.00 € Ị na-echekwa € 40
Cornice Rose / Nwa
Nye ọnụahịa14000 € 140.00 € Ụdị oge 18500 € 185.00 € Ị na-echekwa € 45
Cornice White / ọla edo
Cornice Yellow / Nwa
Freeride V2 Nwa / agba ntụ
Freeride V2 ojii / uhie
Nnukwu Ọsọ White Storm
Helix Nwa / Blue
Snowdrift Black / acha anụnụ anụnụ
Nye ọnụahịa16500 € 165.00 € Ụdị oge 22500 € 225.00 € Ị na-echekwa € 60
Snowdrift Blue / ọla edo
Snowdrift Green / Nwa
Snowdrift White / Uhie
Oké Ifufe Black / Green
Oke ojii / isi awọ
Oke mmiri ozuzo uhie / acha anụnụ anụnụ
Oké Ifufe White / Blue
Mgbidi Nwa / Enyo
Mgbidi Nwa / Oroma
Mgbidi Uhie / Black
Mgbidi ahụ na-acha ọcha / nwa
Vetikal Black / Blue
Vetikal Black / udara
Nye ọnụahịa8995 € 89.95 € Ụdị oge 18500 € 185.00 € Ị na-echekwa € 95.05
Vetikal Black / odo
MERE NA FREERIDERS.
Anyị na-anya isi na ịmepụta ngwaahịa kachasị mma na ahịa. Anyị bụ akara ngwa anya na ngwa nke anyị na-agba mbọ kwa ụbọchị iji nweta ngwaahịa kacha mma n'ahịa. Nhazi, mmepụta na nkesa ngwaahịa ejiji ngwa anya adịchaghị, gụnyere goggles ski na enyo enyo snowboard arụpụtara na arụmọrụ kachasị elu. Ọ bụ ya mere na www.ullerco.com chọta ụdị enyo goggles dị iche iche Uller® nke kacha mma n'aka gị. Nkọwa teknụzụ niile nke enyo enyo snow na enyo ski dị na nkọwa nke mkpokọta ọ bụla. Agbanyeghị, anyị nwere ike ịgwa gị tupu oge eruo na anyị nwere ọtụtụ ụdị nke enyo enyo enyo ski fotochromic, enyo ski nwere oghere ndọta na-agbanwe agbanwe, yana kwa enyo enyo ski polarized, dabere na mkpokọta nke ọ bụla na ngwaahịa anyị.
AKW TKWỌ AKW FORKWỌ AKW FORKWỌ ND FOR ỌR AND NA ỌROF
Kemgbe ọtụtụ afọ, Uller® ewerela okpueze dị ka otu n'ime ụdị kachasị mma na nke na-eduga na ahịa, yana arụmọrụ kachasị elu na udi ya. N'ezie, ihe niile ika ski goggles Uller® nke anyị na-enye, na-emepụta n'okpuru ahụmahụ nke ndị na-eme egwuregwu na-aghọta na mbụ mkpa nke skiers na snowboarders. Nke a pụtara na ha bụ goggles ski mere site freeriders, maka ndị ọzọ freeriders, mgbe niile na-agbalị ịfefe nke onye ọ bụla n'ime anyị ọkachamara na ọkara ọkachamara na-eme egwuregwu. N'ezie, anyị na-anwale ịdịmma nke enyo ski anyị, site n'afọ ruo n'afọ, anyị na-anakọta data niile iji mepụta mgbanwe ndị dị mkpa, iji gboo ma gafere mkpa nke ndị na-agba ọsọ na-achọsi ike na ndị na-agba ọsọ.
Ndị mmekọ azụmahịa anyị na-ahụ na ị na-ahọrọ enyo enyo Uller® bụ nhọrọ kacha mma gị. N'ihi teknụzụ ọgbara ọhụrụ ya, anyị nwere ike ịnye nkọwa na-enweghị atụ na ọkwa doro anya na-enweghị atụ nye ndị egwuregwu niile tụkwasịrị ngwaahịa anyị obi. Igwe anya anya m High Tech Performance Optics X-POLAR na-eweta agba dị egwu na iche na nke ọ bụla n'ime enyo ski anyị na enyo ski anyị. N'ezie, nkọ agụba nke enyo snow anyị na-abawanye ọdịiche na agba ntụkwasị obi gburugburu anyị mgbe anyị na-egwu egwuregwu snow. N'ụzọ dị otú a, ski masks Uller® na-eme ka ọ dị elu karịa ka ọ dị mma ọbụna n'ọnọdụ ndị kacha njọ.
Dị ka ika, ihe mgbaru ọsọ anyị bụ mgbe niile inye ndị kasị mma ski goggles na ahịa, ma ọ bụ photochromic ski goggles ma ọ bụ magnetik interchangeable oghere ski goggles, ma ọ bụ nanị polaried ski goggles, dabere na nke ọ bụla nchịkọta. N'ihi ya, enyo ski anyị niile na-eme ka ọhụụ nke gburugburu ebe obibi na ahụ efe maka nkasi obi na ịdị jụụ nke onye ọ bụla skier.
Uru kasịnụ maka ego
Ụdị ihe mkpuchi ski nke ị na-ahụ na webụsaịtị anyị dịgasị iche na nha, agba na ọdịdị, mana nke ọ bụla n'ime ha na-enye ihe kachasị mma na ogologo oge. Anyị na-enye nhọrọ dịgasị iche iche, gụnyere ụfọdụ ụdị nke enyo ski polarized, magnetik interchangeable lens ski goggles na ski goggles na fotochromic lenses, yana snowboard goggles maka ụmụaka, dabere na nnweta nke ngwaahịa anyị, nke emepụtara dị ka a. Nhazi Unisex na arụmọrụ kachasị elu dị na ahịa. Na mgbakwunye, anyị na-enye ụdị anyị nke ski goggles UllerIcally site n'oge ruo n'oge na-enwe nnukwu ego na ntaneti anyị. Anyị na-ewepụta oge a iji kpọọ gị oku ka ị leba anya na ngalaba a, wee nwude onyinye kacha mma. Ọ bụrụ n ’ịnye ngalaba na - ahụ maka skai ị chọtaghị nke kachasị mma maka gị n’oge ahụ a kapịrị ọnụ, anyị na - akpọ gị oku ka ị lelee mkpokọta nchịkọta ndị ọzọ nke skị maski dị na webụsaịtị anyị, n’ụdị isi ahụ.
Ọdịmma na arụmọrụ dị elu nke ụdị enyo enyo fotochromic anyị, enyo enyo anyị, oghere na -agbanwe agbanwe magnetik na ugogbe anya na -acha uhie uhie edobela akara anyị n'etiti ụdị enyo enyo kacha mma n'ahịa dị ka ndị mmekọ anyị na -azụ ahịa, ọkachasị maka oke mma anyị. / ọnụ ahịa. N'ime ọtụtụ ugogbe anya igwe anyị nwere, anyị ewepụtala nchịkọta enyo enyo fotochromic yana goggles ski nke na-eme onwe ya ka ọkwa ọkụ dị ugbu a, yana ọdịiche sitere na CAT1. gaa na CAT3. N'aka nke ọzọ, anyị dịkwa nganga ịnye ụfọdụ ụdị enyo enyo enyo na -agbanwe agbanwe, nke na -enye ohere ka onye na -anya ụgbọ elu gbanwee anya m ngwa ngwa wee họrọ ụdị ha chọrọ dabere na ihu igwe na ọnọdụ ọkụ n'ụbọchị ahụ.
Ọtụtụ uru na atụmatụ SITE ebe ịhọrọ
N’etiti uru na uru niile enyo anya-ama na-enye Uller, Nke na-adịghị ole na ole, anyị nwere ike ịkọwapụta ihe ndị a:
Gusi enyo nwere oke iru ala na nkasi obi.
Ekike na oke chere maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị.
Teknụzụ X-POLAR nwere nchedo UV-400 yana sistemụ oyi akwa Dual Layer AntiFog iji gbochie oke ikuku.
Sistemụ ikuku ventilash nke nwere afọ mgbochi.
Mpempe mgbochi mkpịsị mkpịsị mgbochi maka idozi iko ahụ n'isi okpu agha.
Okpokoro nke polyurethane nke thermoplastic nke ịdị larịị kachasị.
Fọdụ n’ime ugogbe ski anyị nwere anya ndọta ike na-agbanwe agbanwe. Modelsdị ndị a na-abịa otu iko maka ụbọchị anwụ na-acha na CAT.3 na nke doro anya maka ụbọchị nke obere visibiliti na CAT.1.
Ọtụtụ ụdị anyị na -ada n'okpuru ugogbe anya ugogbe anya anwụ na -adịchaghị mma, n'ihi ike anya ha.
Igwe eji enyo mma anyị na-abịa nwere ihe mkpuchi microfiber na akwụkwọ mmado gụnyere, ọtụtụ n'ime ha, nwere mkpuchi mkpuchi siri ike ka ị nwee ike ịchekwa ha n'enweghị nsogbu.
Site n'oge ruo n'oge anyị na-ebupụta nnakọta nke ihe nkpuchi skai na nnukwu ọnụ ahịa na ntanetị anyị.
AKWODKWỌ NDREAT Ọ BREATRREAT, Ọ B SKR SK ILỌ AHI
N'ime ụlọ ahịa anyị n'ịntanetị ị na-ahụ mgbe niile onyinye dị elu na ọtụtụ ụdị anyị nke ugogbe anya na nkpuchi snow. Ihe kachasị mma bụ na ndị otu anyị na-ere ahịa na-emelite skaipụ na webụsaịtị anyị mgbe oge ịzụ ahịa malitere. Na Uller® anyị hụrụ n'anya imepụta na imepụta enyo ski maka ndị na-agba ọsọ na ndị na-agba ọsọ gburugburu ụwa. N'ezie, ihe niile ski goggles dị na anyị website nakwa na anyị ski outlet sitere na okike, omume, njem njem na ndị enyi ... Mgbe anyị ski anyị na-eche na ndụ, anyị dị ndụ.
Gwa m ka ị na-azụ ma aga m agwa gị otu ị si asọmpi